New Caledonia Tourism ụzọ show nwere naanị otu ebe Europe
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » New Caledonia Tourism ụzọ show nwere naanị otu ebe Europe
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akwụkwọ akụkọ Italy • New Caledonia Na -agbasa Akụkọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị nnọchi anya njem nlegharị anya nke New Caledonia (Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud) nke osote onye isi njikwa ya, Oriaku Julie Laronde duziri, mere njem mbụ ya na nkwụsị nke ụzọ njem Europe na Milan, Italytali.
Julie Laronde kọwara, "Anyị kwenyesiri ike na ahịa Italiantali [maka] ikike dị ukwuu maka ndị njem na-achọ ebe pụrụ iche na ahịa niche dịka mmiri mmiri na ezumike mmiri ezumike."
Europe maka ha nwere ikike kachasị elu, yana ndị mbata na 2018 ruru 35% nke ihe karịrị 120,000 ngụkọta, karịa French niile, ndị German na ndị Italitali na-esote (ihe dị ka otu puku afọ na afọ).
"Ebumnuche bụ iru ndị njem nleta 200,000 ka ọ na-erule afọ 2025, na-elekwasị anya na isi mgbanaka atọ dị mkpa: ịba ụba nke ụdị ndụ dị iche iche anyị, ọdịbendị obodo, na ịnye oke nhọrọ nke ihe ndị a na-eme n'èzí."
New Caledonia na-apụta dị ka ebe ọhụụ, nke gbagwojuru anya ma zuo ezuo. Ọ bụ ihe ọzọ na Pacific ebe ọ ga-ekwe omume ịghara ịhụ ndị njem nleta ndị ọzọ (ihe na-erughị 1 kwa kilomita kilomita), yana ahịhịa na ahịhịa na anụ ọhịa nke 76%, 25 Celsius ihu igwe n'afọ niile, na akara njem dị iche iche.
Mpaghara 5 n'ezie hụ na oke osimiri zuru oke na agwaetiti: site na Loyauté ruo ama Isola dei Pini, yana ndị anaghị egbochi anwụ sunscreens, na ụdị Riviera na ndụ abalị na isi obodo Noumea. E nwere ọrụ ịnyịnya, golf, na nnukwu ebe ọdịda anyanwụ na West Coast. Obodo Karnak dị na East Coast na njem njem njem nke Australia na-echere ịnụ ụtọ, ebe ị ga-aga n'okporo mmiri whales n'etiti July na Septemba na Great South, ndị ọkachamara UNESCO na-achịkwa oke mmiri coral na-amaghị nwoke kwa afọ.
N'ime oru ngo uto ya, ulo oru a amalitela mgbasa ozi nkwukọrịta mba ụwa na mmefu ego nke Europe mụbara site na 11% nke na-agagharị n'akụkụ lagoon n'ụdị nke obi na ịkwụ ụgwọ "obi anyị na-eme ka obi gị daa" na mkpọsa azụmahịa (naanị n'ịntanetị ) ebe otu onye na-anụ ụda obi na ụda obi.
A na-enyefe ọtụtụ ọrụ n'ahịa ,tali, ya na New Caledonia na ndị na-eme njem nleta 10-12 maka mmemme, njem ezinụlọ, na ọzụzụ azụmaahịa, na-enyefe onye ahịa ikpeazụ, yana mmeghe nke ibe Facebook na Andtali na mwepụta nke hashtag #viaggiaconilcuore. Thezọ nke ụlọ ọrụ ahụ na-esite na-adọta ndị njem nleta na-agụnyekwa ndị ọrụ mpaghara, gụnyere ụlọ akụ, ha niile: ọkọlọtọ ụgbọelu Aircalin na-emezigharị ụgbọ mmiri ahụ, nnukwu ụlọ oriri na ọ areụ areụ na-abata na Lifou nke kachasị n'àgwàetiti ndị na-eguzosi ike n'ihe, na Noumea ebe ọhụụ mmiri ọhụụ nabata ndị njem ụgbọ mmiri nwere mpaghara ndị na-agagharị agagharị.